Tranomboky Feminista Ao Meksika Manana Fikasana Hanolotra Zava-Baovao Ho An’ny Vehivavy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Avrily 2016 7:11 GMT
Vakio amin'ny teny English, čeština , русский, Italiano, Français, Ελληνικά, 日本語, Español
“Sady tsy fitiavana no tsy andevo.” Sary: Tranom*boky Feminista / Facebook
Ny Tranomboky Feminista dia vondrona ao amin'ny Facebook izay vehivavy Meksikana roa no nitantana azy efa ho herintaona mahery kely izao. Ankehitriny, manana mpanaraka mihoatra ny 9000 ny vondrona. Naorina ny Tranomboky mba hanangonana vaovao momba ny feminisma sy ny zon'ny vehivavy:
Manangona fitaovana momba ny feminisma sy ny vehivavy mpamorona izahay mba hizarana azy manerana izao tontolo izao. Tianay ny hanaparitaka ny kolontsaina feminista miaraka amin'ny fahasamihafana rehetra sy ny fandraisany anjara amin'ny fananganana tontolo azo atao hafa azo tanterahina.
Niresaka tamin'ny mpitantana roa ao amin'ny vondrona ny Global Voices, mitafatafa momba ny feminista sy feminisma, ny hetahetam-baovao mari-pototra, sy ny maha zava-dehibe ny andraikitra.fizarana ilay vaovao. Ao amin'ny firenena tahaka an'i Meksika, izay mampatahotra indrindra ny fahatetehan'ny ny famonoana vehivavy sy ny fanararaotana vehivavy, dia miezaka ny hanaitra ny olana lalim-paka eo amin'ny kolontsaina sy ny dina isan-karazany ny tetikasa toy ny Tranom-boky Feminista .
Na izany aza, midika zava-dehibe lavitra noho ny fanindriana bokotra fanaparitahana ao amin'ny Facebook ny fizarana vaovao. Midadasika ny habetsaky ny vaovao hita amin'ny aterineto ary tsy mijery mihoatra ny lohateny sy ny sary matetika ny mpamaky. Izany no mahatonga ny Tranomboky hampirisika ny hevitra hoe “andraikitra amin'ny famoahamboky.” Voafantina tsara sy voavaky ary voamarina ny soratra, ny vaovao, ny sary, sy ny lahatsoratra novokarin'ny Tranomboky alohan'ny amoahana azy ao amin'ny Facebook.
Ny Mpiandraikitra ny Tranomboky
Toy ny tranga niseho tamin'ireo mpikatroka maro hafa, nanomboka nandinika ny andraikitry ny lahy sy ny vavy sy ny fihetsiketsehana feminista amin'ny alalan'ny zavatra niainany manokana ny mpitantana ny vondrona.
Mifandray amin'ny olan'ny fikarakarana ny vatana, ny fahavitan-tena ara-tsakafo, sy ny hevitra momba ny fahafahana manoloana ny fanjakana sy ny tsindrin'ny tsena ny ny fikasan'ny mpanorina ny vondrona hanangana ny feminisma. Nanoka-tena ho amin'ny fombam-piainana hafa itondrana ny zom-pirenena sy ny ady amin'ny fankahalana sy ny fanararaotana atao amin'ny vehivavy ihany koa ny mpandray anjara amin'ny vondrona:
Tsy maintsy nivadika ho feminista aho hiavotan-tena. Rehefa miasa amin'ny olan'ny firaisan-kina ianao eo amin'ny toe-karena, dia tsy azonao an-tsaina fa hanana mpiara-miasa hanohintohina anao ianao. Nefa izany no zava-misy. Mitranga amin'ny hetsika izay heverina ho solon'ny rafitra ihany koa ny tsy fitiavana sy ny fankahalana vehivavy ary voagejan'ireo fitsarana an-tendrony sy ny herisetra ny fahafahantsika mandray anjara. Mpitarika fikambanana ny mpiara-miasa tamiko teo aloha, ary noroahina tao amin'ny vondrona aho rehefa tsy te hanohy ny fifandraisana. Niaina ny tsy rariny aho, na dia tamin'ireo namako akaiky aza, izay nilaza tamiko fa zava-poana ny teniko noho ny fiarahako taminy. Izany no antony, ho fiavotan-tena, ​​nanombohako ny fikarohana. Mila mitady hevitra ianao mba tsy hieritreretanao intsony fa ara-dalàna ny fitondrana anao toy izany.
Manana hafanam-po amin'ny tranga mitovy amin'izany ao anatin'ny vondrona fiarovana ny vehivavy ny mpiara-miasa hafa voalohany tao amin'ny tranomboky. Maro amin'ireo fikambanana, hoy izy, no manana lesoka rehefa tonga amin'ny fotoana hanaovana asa mivaingana:
Nanana fahafahana hiasa amin'ny toeram-pitsaboana aho, nefa ny zava-nitranga nampiseho tamiko fa tsy manana ny fanahin'ny firaisan-kina matetika ny vondrona manao ny tenany ho miaro ny vehivavy.
Ny Tranomboky Feminista dia manana fikasana ny hamorona sehatra-virtoaly, na hita vatana- ahafahan'ny vehivavy miaramizara sy miara-mifampidinika. Mino ny mpitantana ny vondrona fa izany dingana tsotra izany no mety ho fiandohan'ny fiovana maro ilaina:
Mino ny fisian'ny hery ao amin'ny tahala ho an'ny sy nataon'ny vehivavy aho. Tsy mino aho hoe ratsy ny toerana ifaneraseran'ny lahy sy ny vavy, fa sehatra nianarako zavatra maro ny notantanin'ny vehivavy efa nihaona tamiko, izay tsy ny asa teorika ihany no hita, fa ny tsikera sy ny fitsikeran-tena. Sarotra izany paika izany, na dia miasa ao amin'ny fikambanana natokana ho fiarahamonim-pirenena aza. Heveriko fa misy ny sakatsakana asa eo amin'ny resaka vehivavy, efa nahita olona manana fototra matanjaka eo amin'ny zon'olombelona aho, ​​izay mampiseho ny tsy fahalianany amin’ ity lohahevitra ity, ary lazainy fa tsy miresaka afa-tsy ny momba ny vehivavy ianao ary mikasa ny hanilika ny lehilahy. Amin'ny maha anisan'ny fiaraha-monina sivily voarafitra ahy, dia matetika isika no mandiso ny fikasana ny hamakafaka ny zava-misy, nefa tsy manontany akory ny tombontsoany.
Ity asa ity, hoy ny mpitantana ny vondrona: dia mamaly ny filàna azo tsapain-tànana:
Sarotra ilay izy, nefa koa mahafinaritra ny mahita olona mifandray tadin-dokanga momba ny faniriana mba hamorona zavatra. Rehefa nasaina aho [ tamin'ny fananganana ny vondrona] dia niteny hoe “Eny!”, satria, na dia nanana mpiara-miasa izay niasa miaraka tamin'ny fikambanana momba ny olan'ny feminisma aza aho, dia tsy miaraka miasa amin'ny toerana iray izahay. Tena tsara ihany koa ny mamorona sehatra virtoaly mba hizarana sy hamoronan-kevitra hatrany. Mahaliana ny fihetsehana amin'izany dingana izany .
Mandratra ny Feminisma
Nihomehy ilay mpiandraikitra ny tranomboky amin'ny hevitra ratsy sy ny ady miavaka izay niseho teo amin'ny sehatra natokana ho an'ny feminisma. Efa manasongadina ny hetsika ny faniratsirana aterineto, ny valinteny mahery vaika, ary ny hetsi-panoherana . Taorian'ny fifandonana sasany, nanapa-kevitra ny Tranomboky Feminista ny tsy hamaly ny fanehoan-kevitra izay tsy mitondra amin'ny adihevitra mahasoa:
Ny Feminisma dia fanefitra hanoherana ireo zavatra izay maha-ketraka anao hizaka ny habetsahan'ny herisetra vokatry ny fankahalana vehivavy hiaretanao isan'andro. Maharary ny fahatsapana izany, nefa izay no hany fomba hahitana ny antony mahatonga anao hijaly. Hahatsapa ianao fa ny zava-nitranga izay nanome anao fanaintainana dia tsy “voajanahary” na “ara-dalàna.” Nisy zavatra manindry mandry ianao, nefa tsy sahy akory ianao nanome anarana izany. Mahatsapa ianao fa niady mafy mba ho afaka sy hanafaka antsika rehetra ny vehivavy niaina izany nandritra ny taonjato maro dia maro. Isaky ny mahita ilay tantara aho sy ny teny momba ny vehivavy eo anatrehako, mahatsapa tony sy mavitrika aho. Mila mahafantatra bebe kokoa momba ny tantarantsika isika -momba ny antsika manokana. Izany no aingam-panahy ao ambadiky ny Tranomboky Feminista.
Ny ankamaroan'ny zavatra nivoaka tao amin'ny Tranomboky ihany koa dia fitaovana miteraka aingam-panahy. Nozaraina ihany koa ireo tranga sy tantara niseho tamin'ny faritra samihafa tamin'ny kaontinanta izay tian'ny maro vokarina indray. Ohatra iray amin'izany ny tantaran'ny ny fananganana ny “Sekolin'ny Vehivavy Lohalaharana.” (Ny lahatsary voalohany nivoaka an-tserasera tao amin'ny YouTube fantsona Education in Motion .) Raha ny marina, izay no zavatra manaraka izay tian'ny mpiandraikitra ny tranomboky ho tanterahana: fanatanterahana fitarihandalana iombonana mba hanampiana ny vehivavy hiaro ny zony.
Nesorin'ny Global Voices noho ny antony fiainana manokana sy fiarovana ny anaran'ireo mpitantana ny Tranomboky Feminista.